घरमा सधैं झगडा, अशान्ति र पैसाको संकट त छैन ? पितृदोष हुन सक्छ, यसरी पाउनुस मुक्ति - Everest Dainik - News from Nepal
घरमा सधैं झगडा, अशान्ति र पैसाको संकट त छैन ? पितृदोष हुन सक्छ, यसरी पाउनुस मुक्ति
एभरेष्ट डेस्कः पितृ दोषका बारेमा शास्त्रमा बिभिन्न धारणा पाइन्छन् । ज्योतिष र पुराणमा यसबारे फरक मान्यता देखिन्छ ।
तर एउटा सत्य कुरा के हो भने पिृतदोषका कारण हाम्रो सांसारिक जीवन र अध्यात्मिक पक्षमा बाधा उत्पन्न भने हुन्छ ।
सबैले मानेको कुरा, हाम्रा पूर्वजहरुको रगत हाम्रो नसा नसामा बगेको हुन्छ । हाम्रा पूर्वज पनि धेरै प्रकारका छन् । यदि पुनर्जन्मलाई मान्ने हो भने आज हामी यहाँ जन्मेका छौं हिजो कतै अन्य जन्मेका थियौं ।
के हो त पितृ दोष
पितृ दोष कैयन किसिमका हुन्छन् । पूर्वजहरुको कारण वंशजहरुलाई हुने कुनै पनि प्रकारको कष्ट नै पितृ दोष हो भन्नु मात्रै सही हुँदैन । यो दोष अरु कतिपय कारणले पनि उत्पन्न हुन्छ । यसलाई पितृ ऋण पनि भन्न सकिन्छ ।
ज्योतिषशास्त्रका अनुसार, पितृ दोष र पितृ ऋणबाट पीडित कुण्डलीलाई श्रापित कुण्डली भनिन्छ । यस्ता व्यक्ति आफ्नो माृतपक्ष अर्थात् माताका अतिरिक्त मामा माइजु, बाजे बज्यै तथा पितृ पक्ष अर्थात् बाजे बज्यै, काका काकी, फुफाजु फुफु आदिलाई कष्ट दिन्छन् । उनीहरुको अवहेलना र तिरस्कार गदृछन् ।
जन्मपात्रोमा यदि सूर्यमा शनि राहे केतुको दृष्टि या युतिको प्रभाव छ भने जातकलाई पितृ ऋणको स्थितिमा रहेको मानिन्छ ।
व्यक्तिको कुण्डलीमा नवौं भावलाई पूर्वजहरुको स्थान मानिन्छ । यो आधारम ापनि नवग्रहमा सूर्य स्पष्टरुपमा पूर्वजको प्रतिक मानिन्छन् । यदि कुण्डलीमा सूर्य नराम्रा ग्रहहरुसँग छन् या सूर्यमा नकारात्मक ग्रहको दृष्टि परेको भए त्यो पनि पितृ दोष हुन्छ
तर योसँगै व्यक्ति आफ्ना कर्मका कारण पनि पितृदोष सिर्जना गर्दछन् । विद्वानहरुले पितरहरुको दोषको सम्बनध गुरु बृहष्पतिसँग रहेको बाताएका छन् । यदि गुरु ग्रहमा दुई नकारातमक ग्रहको असर भएमा र गुरु १२ औ) भावमा छन अथवा निम्न राशिमा छन या अंशद्वारा निर्धन छन भने यो दोष पूर्णबाट घटछ । यदि यो दोष पछिल्लो पूर्वज बाजे या बुवादेखि चलेको छ भने सात पींढिसम्म चल्ने ज्योतिषशास्त्रमा उल्लेख छ
लाल किताब अनुसार पिृत ऋण कैयन प्रकारका हुन्छन् । जस्तो हाम्रो कर्म, आत्मा, बुवा, भाई, बहिनी, आमा, श्रीमती, छोरी र छोरीको पिृत ऋण ।
जब कुनै जातक आफ्नो पूर्व जन्ममा धर्मविरोधी कार्य गर्छ र यो जुनीमा पनि त्यस्तै काम गर्छ भने यो दोष उसमा स्वतः निर्मित हुन्छ ।
स्वऋणका कारण निर्दोष भएर पनि त्यसको सजाय पाइन्छ । मुटुको रोग, कमजोर स्वास्थ्य हुनछ । जीवनमा सधैं संघर्ष बनिरहन्छ । मानसिक तनावबाट कहिल्यै मुक्ति पाइन्न ।
यसैगरी पितृ धर्म छोडदा या पूर्वजहरुको अपमान गर्दा समेत पितृ ऋण बन्छ । यो ऋणको दोष तपाईका बच्चामा पनि लाग्छ । जसले तपाईलाई कष्ट दिएर यसप्रति सतर्क बनाउँछन् ।
पितृ ऋणका कारण व्यक्तिलाई मान प्रतिष्ठाको अभावबाट पीडित हुनुका साथै सन्तानबाट कष्ट, सन्तान अभाव, सन्तानो स्वास्थ्य खराब या सन्तान गलत संगतीमा पर्ने अवस्था हुन्छ ।
कसलाई लाग्छ त पितृ दोष
गरुड पुराण अनुसार, जुन परिवारमा मानिसहरु आफ्नो पितृको पुजा या श्राद्ध गर्दैनन ।
पीपलको रुखलाई पितृको बासस्थानका रुपमा लिइन्छ । यस्तोमा पिपलको रुख काटने या त्यहाँ फोहोर फाल्नेहरुलाई यो दोष लाग्छ ।
बुवा आमाको मृत्युपछि यदि अरु जीवित परिजनको अनादर गरेमा ।
दोष छ भनेर कसरी चिन्ने त ?
यदि व्यक्तिको घरमा लगाता धनको कमी भइरहन्छ भने
यदि कुनै व्यक्तिको बिवाहमा बारम्बार विघ्न बाधा आइरहन्छ भने कुण्डलीमा पितृ दोष हुन सक्छ ।
परिवारमा सधैं झगडाको वातावरण, शान्ति नहुने स्थिति भएमा ।
यदि परिवारमा कुनै न कुनै सदस्य सधैं बिमार रहिरहन्छ भने
पितृ दोष हटाउने उपाय
भदौ २७ गतेदेखि पितृपक्ष शुरु भएको छ । यो असौज कृष्ण पक्षको अमावश्यासम्म रहनेछ । श्राद्ध कर्मका बेला आफ्ना पितरहरुका लागि पिण्डदान, हवन र अन्न दान गर्ने गरिन्छ । यो पूर्वजहरुप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने सबैभन्दा ठूलो संस्कार हो ।
यदि कुनै व्यक्ति पितृ दोषबाट पीडित छन भने यसबाट मुक्ति पाउन कुनै पनि अमावस्या, पूर्णिमा या पितृ पक्षमा श्राद्ध गर्नुपर्छ । यसबाट पितृहरु तृप्त भएर सुखी जीवनको आशिर्वाद दिने गर्दछन् ।
घरमा बिहान नुहाएर मात्रै भान्सामा गएर खाना बनाउने गर्नुपर्छ ।
खानाको पहिलो गाँस गौ माताका लागि निकालेर त्यसमा गुड राखेर गाईलाई खुवाउनुपर्छ ।
घरमा पानीको स्थान सधै सफासुग्घर राख्नुस । यसलाई पितृको स्थान मानिन्छ ।
सोह्र श्राद्धमा सूक्ष्मरुपमा पितरहरु हामीकहाँ आउँछन् भन्ने मान्यता छ । अनिष्टकारी प्रभावबाट जोगिन श्राद्धको १६ दिनमा ४ वटा उपाय गर्नुपर्दछ ।
(क) १६ दिनमा साँझ पानी भएको नरिवललाई आफूमाथि ७ पटक घुमाएर तीब्र गति भएको नदी या पानीको प्रवाहमा बगाउनुस र पितृसँग आशीर्वादा माग्नुस
(ख) १६ दिनसम्म अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण गर्नुस
(ग) १६ दिनहरुमा घरमा १६ या २१ मयुरको प्वाँख अवश्य ल्याएर राख्नुस
(घ) १६ दिनमा शिवलिंगमा जलमिश्रित दूध अर्पित गर्नुस
यो बाहेक तपाईले कुण्डली राम्रोसँग हेरेर पितृ दोषबाट मुक्त हुने अनुष्ठान पनि गर्दा लाभ हुन्छ ।